Faahfaahin: Qarax Is-miidaamin ah oo ka dhacay Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Faahfaahin: Qarax Is-miidaamin ah oo ka dhacay Soomaaliya
Taliyaha ayaa xaqiijiyay in afar Askari oo kaliya ay uga dhaawacmeen qaraxa, oo xogtiisa la hayay, islamarkaana laga hortagay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Ciidanka MIliteriga Soomaaliya Jen Odowaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in afar askari looga dhaawacay qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay saakay degaanka Biyo-Cadde, ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wuxuu xaqiijiyay in weerarka laga hortagay kadib markii ay Ciidanka ku sugan saldhigga ka warheleen inuu kusoo socda Gaari lagu soo xiray walxaha qarax, kaasoo uu wado nin naftii-hurre ah oo doonayo inuu qarax ku laayo askarta iyo taliyeyaashooda.
Jen Odowaa ayaa beeniyay warar Al-Shabaab ay baahisay oo sheegaya in 10 askari ay ku dhinteen qaraxa, kaasoo sida ay Keydmedia Online ogaatay ujeedkiisu ahaa in lagu dilo Korneel Saneey Cabdulle, oo ah taliyaha guutada 4aad ee Ciidanka xoogga.
Korneel Saneey ayaa ahaa taliyihii hogaaminayay Ciidankii Badbaado Qaran ee kahor tagey isku-daygii afgembi ee uu damacsanaa Farmaajo bishii April ee sanadkan, waxaana muuqata inuu socda qorsho lagu qaarijinayo taliyeyaashii kasoo horjeestay Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaadey.
Waxaa jiray taliyeyaal badan oo la qaarjiyay, iyadoo Al-Shabaab loo fududeeyay weeraradii lagu dilay shaqsiyaadkan oo uu kamid yahay Jen Galaal iyo kuwa kale oo aad u diidanaa xukunka Farmaajo ee ku dhisan nin jeclaysiga, kaligii-talisnimada iyo qabyaaladda.